Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : solonysysariny
Teny iditra Solony sy sariny (solo, sary)
Mpanoratra Ramangamalefaka (Ramandiamanana Alfred), 1923/01/26
Lahatsoratra Indray tolak'andron'ny asabotsy, nirantiranty ny mpitazana eran' ny sisin-dalana teo Antsampanimahazo. Razaiarisolo, vavy tokan'ny mpanankarena, sady nalaza amin'ny fahaiza-mihaingo, no hatao mariazy amin'ny tovolahy anankiray, ka handalo eo. Amin'ny telo no fotoana dia namorom-potsy sahady ny arabe. Nipaika ny telo, fa tsy mbola nisy nanelohelo. Naneno ny antsasany, fa fiandrasana tsy nisy asany. Velona ny efatra, fa ny maso foana no valalanina sy navesatra! Nanomboka nimonomonona ny mpizaha: itony moa, ka aiza no tsy afokain'ny olona hoe: Fotoan-gasy! - Aza manao io izany, hoy kosa ny sasany, fa mbola miomana tsara hotazaninareo izy. Ny fanambadiana koa angaha, hono, raha tsy somary disoim-potoana kely mba mety marina indrindra.